ခရီးသည်တင်ယာဉ် အများပိုင် ကုမ္ပဏီများတွင် တိုင်းအစိုးရ ဘီလီယံ ၇ဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှု အေ?? - Yangon Media Group
ခရီးသည်တင်ယာဉ် အများပိုင် ကုမ္ပဏီများတွင် တိုင်းအစိုးရ ဘီလီယံ ၇ဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားမှု အေ??
ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီများတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသော ကျပ်ဘီလီယံ ၇ဝ နှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးအမြတ်မည်မျှရရှိသည်ကို အသေးစိတ်အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြပေးရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အချို့ တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မေ ၂၅ ရက် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်းက ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေတွင် City Bank ၌ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံငွေထည့် ဝင်ခြင်းအတွက် ကျပ် ၆၄ ဘီလီယံကိုလည်းကောင်း၊ ခရီးသည်တင် မော်တော်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင် ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီများတွင် ထည့်ဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအတွက် ကျပ်ဘီလီယံ ၇ဝ၊ လယ်ယာမြေများပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ငွေကျပ် ၇၇၄၈ ဒသမ ၃ဝ၁ သန်းကိုလည်းကောင်း လွှတ်တော်မှခွင့်ပြုပေးခဲ့ခြင်းအပေါ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးမှ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် တစ်နှစ်ပြည့် အစီရင်ခံစာ၌ တင်ပြဆွေးနွေးပေးရန် အဆိုကို တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းအဆိုနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေ ၂၉ ရက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ငါးဦးက ဆွေးနွေးခဲ့ကြရာ အများစုမှာ ခရီးသည်မော်တော်ယာဉ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအများပိုင်ကုမ္ပဏီများတွင် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံထားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးအမြတ်အခြေအနေကို အစီရင်ခံစာ၌ဖော်ပြပေးရန် ထောက်ခံဆွေး နွေးခဲ့ကြသည်။ တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားသည့် YUPT နှင့် YBPC အများပိုင်ကုမ္ပဏီများသည် အရှုံးပေါ်နေသည်ဟုဆိုသည့်အတွက် ယင်းစာရင်းများကို အသေးစိတ်အစီရင်ခံစေလိုကြောင်း ဒဂုံမြို့ နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ဇေယျက ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ငွေကျပ် ဘီလီယံ ၇ဝ ထပ်မံ တောင်းခံခဲ့မှုကို လွှတ်တော်မှကန့် ကွက်သူမရှိ အတည်ပြုပေးခဲ့ခြင်း ကြောင့် တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့က ယင်းဘဏ္ဍာငွေကို သုံးစွဲခွင့်ရရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ပြောသည်။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ခုနှစ် ဖြည့်စွက်ဘဏ္ဍာငွေမှ ငွေကျပ်ဘီလီယံ ၇ဝ ကို တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအ ဖွဲ့အနေဖြင့် YBS ယာဉ်စီးရေ ၁ဝဝဝ ဝယ်ယူကာ ကားအစီးရေ ၅ဝဝ စီကို YUPT နှင့် YBPC အများပိုင် ကုမ္ပဏီများ၌ထည့်ဝင်ပြီး အစုရှယ်ယာအနေဖြင့် ရာခိုင်နှုန်း ၉ဝ နီးပါး ပါဝင်ထားသည်ကို သိရှိထားကြောင်း ပို့ဆောင်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် စက်မှုလက်မှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး အင်းစိန်မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂)မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝေဖြိုးဟန်က ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
” YBS ကို စတင်ပြောင်းလဲချိန်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တွေအားလုံး ပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။ မိမိတို့အစိုးရရဲ့ လုပ်ငန်းစီမံကိန်းဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခရီးသွားပြည်သူအဆင်မပြေ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မထသစနစ်ကို ပြောင်းလို ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အ ပြင် အစိုးရအများပိုင်ဘတ်စ်ကား ကုမ္ပဏီတွေမှာ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ထားခြင်းကို လက်ခံပေးထားပြီး ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ယနေ့အခြေအနေများက သက်သေပြထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့အရှုံး အမြတ်ဆိုတာ တစ်နှစ်တစ်ခါမှတွက်ချက်ရတယ်ဆိုလို့ YRTA တစ်နှစ်အကြာမှာ မျှော်လင့်ခဲ့ကြပါတယ်။ သို့သော်မည်သည့် အသံတစ်စုံတစ်ရာမှ မကြားရတဲ့အတွက် အဆိုမှာ ဝင်ရောက်ထောက်ခံရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတကာ နိုင်ငံခြားသံရုံးများ လာရောက် ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန် မြေနေရာ ၂၇ ကွက် ?
လက်ရှိအစိုးရ သက်တမ်းအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံပါ ငွေစက္ကူ ထုတ်ဝေမည်